Indlela yokwenza iinwele ezijikelezayo- Iingcebiso kumadoda eSitayile | Amadoda aQinisekileyo
Njani ukuba neenwele curlier
Ngokuqinisekileyo udiniwe ukuba neenwele ezinemilo efanayo. Nokuba bayayitshintsha inkangeleko yakho kwizinwele, iinwele zihlala zimiselwe kwicala elinye kwaye uphela unenkangeleko efanayo. Nangona ungakholelwa, ukufumana iinwele ezihamba phambili okanye ukufumana imvume, kuyenzeka.
Uninzi lwamadoda afuna ukwenza iinwele ezijikelezayo ngabo uneenwele ezithe tye okanye ezingakhangekiyo. Ngezixhobo zokuloba kunye neemveliso ezifanelekileyo Ungayifumana loo curl okanye iliza elilindelweyo. Kuphela kukuba neenwele azifutshane kakhulu ukuba zingasetyenziselwa injongo yakho.
1 Ungazenza njani iinwele ezihamba phambili?
1.1 Curl iinwele kunye nokomisa
1.2 Curl iinwele ngaphandle koncedo lokomisa
1.3 Iinwele ezivumileyo zokugoba
Ungazenza njani iinwele ezihamba phambili?
Ungasebenzisa naziphi na iindlela esiphakamisa ngezantsi. Ungasebenzisa indlela esebenzayo yokusebenzisa isomisi ngokudibeneyo kunye nezinye iimveliso, sebenzisa ezinye izixhobo okanye ubuchule obulula obuncinci obusetyenziswe ebomini, nakumabhinqa. Okanye uye kwindawo yokulungisa iinwele kwaye fumana imvume. Khetha eyona nkqubo yakho ilungileyo ukuze uzive ulungile.
Curl iinwele kunye nokomisa
Akukho nzima ukufumana ubuncinci i-wavy kunye neenwele ezingenazinwele ngala manyathelo alula, njengebhonasi Uyacetyiswa ukuba ubuncinci ubuncinci i-10 cm yeenwele ukuze ubone iziphumo:
Hlamba iinwele zakho njengesiqhelo. Ukuba uyafuna, ungasebenzisa ishampu ekhethekileyo yokwenza i-hydration elungileyo kwaye ekhethekileyo kwiinwele ezigobileyo.
Zomise iinwele zakho ukunciphisa amanzi amaninzi, kodwa zama ukungasusi ukufuma okungaphezulu. Ukuyigcina imanzi ngokwaneleyo kubalulekile, kodwa ngaphandle kokuphuma kwayo. Faka isicelo sokukhusela i-thermal ukukhusela iinwele kubushushu bokomisa.
Tshiza iinwele zakho ngolwelo oluselwandle olunetyuwa. Le mveliso iyamangalisa, njengoko inika iziphumo eziqaqambileyo ukunika ukubukeka kwe-wavy kwizinwele. Kwelinye icala, ukuba awunayo imveliso esekwe kwityuwa yolwandle, Unokufaka igwebu elikhethekileyo kwii-curls Isebenza ngokukuko ngokukuko. Siza kufaka imveliso ukusuka kwiingcambu ukuya kwiiphelo, senze imicu ngeminwe.
Qala ukomisa iinwele zakho. Ukuba une-diffuser yokuncamathisela kwi-dryer, kuya kuba lula kakhulu ukongeza ivolumu kwaye usasaze ubushushu ngokulinganayo. Ukuba oku akunjalo kwaye unomlomo omnene, yisuse ukuvumela isomisi ukuba sisasaze umoya ngokubanzi.
Ngezandla zakho zinceda iinwele ukuba zigobe. Ungazifaka iinwele ezintendeni zesandla sakho ukuze zithathe imilo okanye ngeminwe yakho wenze imilo ngemicu.
Okokugqibela unokunceda gcina ukujonga okugobileyo ngejel yeenwele okanye uhlobo oluthile lwekhrim eguqukayo ukubamba indawo egobileyo. Kukho iimveliso ezinikezela ngesiphumo esimenyezelayo ngenkangeleko emanzi okanye ngesiphumo se-matte, ukuze ibonakale indalo ngakumbi.
Curl iinwele ngaphandle koncedo lokomisa
Ukuba iinwele zakho zihamba kakuhle kwaye kunzima ukuzimisa, mhlawumbi kuya kufuneka usebenzise ezinye iindlela ezisetyenzisiweyo kubomi bakho bonke. Iikhonkco okanye ii-curling iron (njenge-tweezers) zezona zixhobo zibalaseleyo zokujonga.
Kuya kufuneka wenze amanyathelo afanayo nakwindlela yangaphambili. Kufuneka uhlambe kunye neemveliso ezifanayo, kodwa ngeli xesha unokuzomisa iinwele zakho nzima. Faka isicelo sokufafaza ityuwa yolwandle kwaye wahlule iinwele zakho kwimisipha ukuze yome.
Ungasebenzisa ii-curlers, Uya kuqengqa iqhaga ngalinye ngesandi salo esihambelanayo kwaye uyakuyenza ngoluhlobo nazo zonke iinwele zentloko. Ukomisa iinwele ungawuvumela ukuba wome umoya okanye usebenzise isomisi seenwele, nangona olu khetho lokugqibela lunokuzomisa ngakumbi iinwele.
Xa iinwele zakho zomile, vula iziqengqeleki kwaye ufake cream yokulungisa ukuze ii-curls zihlale ixesha elide. Ungasebenzisa ii-gummies okanye ii-wax.
Ukuba ukhetho lwakho ngu sebenzisa i-tweezers okanye i-curling ironKuya kufuneka uyenze xa iinwele zomile, ungaze uzenze ngeenwele ezimanzi kuba uya kuzonakalisa. Thatha i-strand nge-strand kwaye uyisonge. Ukugqiba, sebenzisa izithambiso ezifanayo esele ziqwalaselwe ngaphambili.
Iinwele ezivumileyo zokugoba
Ukuba umbono wakho kukufumana imvume, Kuya kufuneka uye kwindawo yokwenza iinwele ukukucebisa ngohlobo lokugoba olifunayo kwaye usebenzise obu buchule bumangalisayo.
Isigxina Yeyona ndlela ilungileyo yokuba nokuqina, ukugqiba okukhuselekileyo kwaye ulibale ukugoba iinwele zakho ngalo lonke ixesha uzihlambile, fumanisa izibonelelo zayo:
Uyakulibala ukudibanisa iinwele zakho rhoqo ukulungisa iinwele zakho. Ngale nto uyibumbayo kuya kufuneka uzinike iminwe embalwa, kunye namanzi okanye imveliso eyilungisayo.
Iyakusindisa kwimpazamo yemozulu kwaye uhlala ujongeka kakuhle. Ukuba wenza ezemidlalo, yiya echibini okanye kunethe kwaye umanzi, ukuvumela nje ukuba kome iinwele zakho akuyi kubanda kwaye uya kuhlala ujongeka ngokufanayo.
Kukulungele ukugcina umfanekiso omnye kwaye ubonise iinwele ezifanayo ezibukhali. Awusayi kuphinda uvuke kusasa kwaye kuya kufuneka ubone iinwele zakho zingcolile. Kodwa ukuba uthanda ukuba neenwele ze-wavy rhoqo, kuya kufuneka usebenzise ezi ndlela zingasentla. Uyakwazi ukufunda Oku kubhaliwe oko kuya kukunceda ufumane uhlobo lweenwele ezigobileyo ofuna ukuziphumeza. Ukuze usebenzise ezona mveliso zibalaseleyo kwintengiso, ngena apha kwaye ufumane ukuba zeziphi ezona zixabisekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Njani ukuba neenwele curlier
Ungazisebenzisa njani iinethiwekhi zentlalo ngokukhuselekileyo